8Yar (အိပ်ယာ): အသဲပျော့လူသား
Posted by 8Yar at 11:37 pm
နေမိုးချစ်သူက ခွင့်လွှတ်ပါတယ်တဲ့... :D
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် စာမရေးဘူးလားဆိုပြီး စွာမလို့ရောက်လာတာ... ရေးပြီးသားဖြစ်နေပြန်ပြီ... 8yar တို့ ကံသိပ်ကောင်းနေတာ.. ဟားဟားဟား.. xD
8yar ရေ... ဘုန်းဘုန်းဆိုတော့လဲ အသဲအားဆေးများများစားပါ လို့ပဲ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ(P)
Candy > ဟတ်ဟတ်ဟတ်ဟတ် တော်သေးတာပေါ့ဂျာ။ ဒီလောက်ကံကောင်းနေတာ ထီလေးတစ်စောင်လောက်တော့ထိုးအုံးမှ... ခစ်ခစ် အင်းပြီးတော့ခွင့်လွှတ်တယ် ဆိုပဲ။ နေမိုးနဲ့တော့ တစ်ခုခုပဲ။ :P
သမီးစံ > တိန်! ကျွန်တော့မင်းသားမှာ အန္တရာယ်တွေဝိုင်းနေပါလားနော်။ ကျွန်တော်ဆက်တွေးတာတော့ နေမိုးကောင်မလေးရဲ့
အဖိုးနဲ့အဖွားက နေမိုးကိုမြင်တော့ "အာဒီကောင်လေးက ငတုံးလေး မကြိုက်ပါနဲ့လားမြေးမလေးရယ်" တဲ့ :P
jasmine(တောင်ကြီး) > ဟားဟားဟား ဟုတ်အစ်မjasmine။ အမျှော်မြင်ကြီးပါပေတယ်ဗျာ။ ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ။
ချယ်ရီမြေ > ဟီး ဟီး တင်ပါ့ဘုရား။ အသဲမာဆေးရှိရင်လဲ ညွှန်ပေးပါဘုရား။ :P ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ။
(ဘုန်းဘုန်းရဲ့ Comment လေးတွေက Spam ဆိုပြီး Spam ဖက်ကိုဝင်ဝင်သွားတယ်ဘုရား။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာကို တပည့်တော်မသိပါဘူးဘုရား။ အရှင်ဘုရားသိရင်ပြောပြပေးပါ ဘုရား။)
ဘယ်နှယ့် အမ်အာတီက ဂျန့်ရတာတုန်း ... :D
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သာဓုပါကွယ် :D
MGTHANT > ဒီလိုပါအစ်ကို တခါတလေ MRT က ရပ်ပြီးလူတွေ အကုန်ဆင်းခိုင်းတာတို့၊ ရပ်ပြီးလူမတင်ပဲ ဟောင်းလောင်းကြီး ပြန်ထွက်သွားတာတို့၊ ဘူတာတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကြားမှာရပ်နေတာတို့ကို ဆိုလိုချင်တာပါ။ ကျွန်တော်ပြောနေကြအတိုင်းပဲ သုံးလိုက်မိတဲ့အတွက် မှားသွားရင် ခွင့်လွှတ်ပေးပါခင်ဗျာ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာလေးပါ ပြောပြပေးပါခင်ဗျာ။ ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။
အရမ်းကောင်းတာပဲ ကို8yar ရေ့
ဒုတ်ိယလူ > ကျေးဇူးပါအစ်ကိုဒုရေ။ ကောင်းသောညခင်းလေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။
ဟွန် .. မိုးခါးကတော့ တက်စီဆို အကျိုးမပေးဘူးဗျ .. အရေးကြီးလို့ ငှားသွားလိုက် လမ်းမှာ မီးပွိုင့်ဂျန့်တာနဲ့ တိုးပါရောလား .. ဒီတော့ များသောအားဖြင့် MRT နဲ့ ကုန်းကြောင်းပဲ အားကိုးတယ် .. :D
နောက်တခါ ချိန်းရင် နောက်မကျအောင် ကောင်မလေးအိမ်နားက ကစားကွင်းမှာ ညအိပ်စောင့်လိုက် :P
မိုးခါး > တိန်! မလုပ်ပါနဲ့ အစ်မမိုးခါးရယ်။ နောက်ရက်ကောင်မလေးက ရဲစခန်းမှာလိုက်တွေ့နေရပါအုံးမယ်။ :P လာအားပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။
နေမိုး ခင်ဗျာ အနစ်နာခံလိုက်တာ